နိုင်ငံအနှံ့အပြားက ဓာတ်ပုံဆရာများ၏ စစ်မှန်လှသည့် ဓာတ်ပုံများ - ONE DAILY MEDIA
နိုင်ငံအနှံ့အပြားက ဓာတ်ပုံဆရာများ၏ စစ်မှန်လှသည့် ဓာတ်ပုံများ
သင်နှင့် သင့်သူငယ်ချင်းတွေက စစ်မှန်မှုဆိုတာ ဘာလဲဟု အချင်းချင်းမေးကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ သင်တို့အားလုံး မတူညီတဲ့ အဖြေ‌ေတွကို ပေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့အတွက်ကတော့ သင်ကိုယ်တိုင်သစ္စာရှိရန် ဒါမှမဟုတ် သင်နှစ်သက်တဲ့အရာကို အမြဲလုပ်ဆောင်‌ေနခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၊ ဓာတ်ပုံဆရာတွေကတော့ စစ်မှန်မှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုပြီး လက်တွေ့ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
ကဲ ကျွန်တော်တို့ အခုဖော်ပြပေးသွားမဲ့ ပုံတွေက ဘယ်လောက်တောင် အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး လှပလိုက်သလဲဆိုတာ ပရိတ်သတ်တို့ကိုယ်‌တိုင်ပဲ ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါတော့နော်။
(၁) Stefano Zocca
(၂) Katalin Száraz
(၃) Mohammad Hedayet Sarker
(၅) Khánh Phan
(၆) Saurabh Sirohiya
(၇) Ramazan Cirakoglu
(၈) Khánh Phan
(၉) Azim Khan Ronnie
(၁၀) . Dina Alfasi
(၁၁) Aleksandr Yurkovskyi
(၁၂) Barun Rajgaria
(၁၃) Yuliya Dobrovolska
(၁၄) 14. Mikhail Kapychka
(၁၅) Oleksandra Chornobab
(၁၆) Zuka Kotrikadze
(၁၇) Pavel Zelenov
(၁၈) Iryna Kalamurza
(၁၉) Yauheni Stsiapanau
(၂၀) Louis Navas
(၂၁) Razmik Zackaryan
(၂၂) Anton Tochnov
(၂၃) 23. Anastasiya Lyubitskaya
(၂၄) Vladyslav Fomin
(၂၅) Prabu Mohan
ဓာတ်ပုံတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ #authenticity_isဆိုတဲ့ Hashtag အောက်မှာ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ ပုံတွေကိုလည်း ပရိတ်သတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောင်လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာတွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ပေ့ခ်ျလေးကို Like & Followပြုလုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
သင့်ဘဝမှာ ‌တစ်‌ကြိမ်လောက်တော့ ရောက်ဖူးသင့်သည့် အံ့ဖွယ်နေရာများ